Membuat Tools Kumpulan Warna Flat di Halaman Statis Blog | Click and Skip
Home » Halaman Statis » HTML » Tutorial Blogger
» Membuat Tools Kumpulan Warna Flat di Halaman Statis Blog
Hai sobat Blogger. Saya dapat request artikel lagi dari +wahyu lazzuardy yang menanyakan tentang "Membuat Tools Kumpulan Warna Flat di Halaman Statis Blog". Dan kali ini Click and Skip akan membahasnya.
Tools ini memudahkan kita untuk memilih warna yang cocok untuk diterapkan. Karena warna yang disediakan sangat menarik. Tidak perlu basa-basi lagi, ini dia:
2. Klik Laman> Laman baru
3. Beralih dari Compose ke HTML
4. Copy kode di bawah lalu paste di kolom HTML laman
&lt;div style="background: #fff; float: left; margin: 0 auto; padding: 9px;"&gt;
&lt;div style="background: #131426; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #15589E; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #1B1B1B; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #1B1C1E; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #232323; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #232A2B; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #277FBF; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #2A2A2A; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #2A7BBA; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #2D2D2D; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #2D3E50; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #2D3E52; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #2F3E48; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #2FCDB4; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #32425C; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #363F48; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #3D3D45; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #3DA3A2; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #40A5C3; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #440136; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #459BB6; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #47AADD; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #4C5262; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #4EA88F; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #50419D; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #61767D; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #69C3A0; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #702E90; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #758D7D; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #77BAB1; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #7ACCC8; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #84267E; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #88B922; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #932256; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #ABD6BA; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #AF2C0E; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #B0D9F5; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;span style="color: black;"&gt;#B0D9F5&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style="background: #D49E99; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #D81E28; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #DC3C48; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #E2614C; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #E56967; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #F0F0F0; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;span style="color: #888888;"&gt;#F0F0F0&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style="background: #F14E4F; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #F1A744; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #F3F3EB; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;span style="color: #888888;"&gt;#F3F3EB&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style="background: #F48067; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #F4F4F4; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;span style="color: #888888;"&gt;#F4F4F4&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style="background: #F6D66F; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #F7C56C; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #F8823C; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #F8C492; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #FA6800; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #FCD475; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #FDC800; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #FEED48; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;span style="color: black;"&gt;#FEED48&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style="background: #FF8850; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #FFB900; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;div style="background: #F4EF6F; color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 20px; height: 120px; padding: 10px; width: 120px;"&gt;
&lt;span style="color: black;"&gt;#F4EF6F&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
Oh iya, maaf saya pernah berjanji untuk memposting ini di tanggal 11 atau 12. Tetapi, karena tadi saya ketiduran dan kelewatan sampai jam 1 pagi tanggal 13 :p